Madaxweynaha famaajo Oo Farriin Tacsi Ah U Diray Madaxweynaha Jabuuti, Cismaaciil Cumar Geelle – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha famaajo Oo Farriin Tacsi Ah U Diray Madaxweynaha Jabuuti, Cismaaciil Cumar...
Madaxweynaha famaajo Oo Farriin Tacsi Ah U Diray Madaxweynaha Jabuuti, Cismaaciil Cumar Geelle
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhambaal Tacsi ah u diray Madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle.
Qoraal laga soo saaray Madaxtooyada Villa Somalia ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu uga Tacsiyadeeyay Madaxweyne Geelle geeridii ku timid walaalkiis Sacad Cumar Geelle.
“Waxa na soo gaaray warka naxdinta leh ee dhimashada marxuumka oo la dhashay walaalkey Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Waxaan Dowladda, qoyska marxuumka iyo guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti ee aan walaalaha nahay u dirayaa tacsi tiiraanyo leh”ayaa lagu yiri War ka soo baxay Madaxtooyada Villa Somalia.
Ugu dambeyn Madaxweyne Farmaajo ayaa marxuum Sacad Cumar Geelle Alle uga baryey Eebbe in Marxuumka uu u danbi dhaafo, kuna abaalmariyo jannooyinkiisa, isaga oo qoyskiisa iyo guud ahaan shacabka reer Jabuuti u rajeeyay samir iyo iimaan.
Previous articleHormuud foundation gaarsiisay Caawinimo Gedo+sawirro
Next articleSoomaaliya oo ka qeybgashey shir caalami oo ka dhacay Geneva+Sawirro
Liiska golaha dhexe ee Xisbiga Kulmiye oo la Shaaciyey